Pọrụ mmiri nke Ọrụ: Usoro BTC-S na-eji teknụzụ agwakọtara agwakọta, nke na-eme ka arụmọrụ nke mmiri mmiri, glycol-solution solution, mmanụ, kemịkalụ, mmiri ọgwụ pharma, acid acid dị jụụ na mmiri ọ bụla ọzọ dị mma.
A na-ekesa mmiri mmiri ahụ n'ime eriri igwe site na ebe a na-ekpo ọkụ.
Raygba Mmiri na ikuku ohuru na-asọba na eriri afọ, nke na-enyere aka belata ọnụ ọgụgụ na-akpụ “ntụpọ ọkụ” enwere ike ịchọta ya n'ụlọ elu ndị ọzọ na-ajụ oyi. Usoro mmiri na-efunahụ Okpomọkụ / Latent Heat ka ọ na-aga site na ala ruo n'elu n'ime eriri mmiri ahụ na-agbapụta mmiri na ikuku na-ebute. Mbelata na akụrụngwa na-eme ka ahụ dị jụụ na-enyere aka iwelata nhazi nke oke n'elu igwe. Otu akụkụ nke okpomọkụ a na-ekpo ọkụ na-ahapụ ikuku n'akụkụ ikuku site na ikuku ikuku.
Mmiri na-enweghị mmiri na-ada site na ngalaba jupụta, ebe ọ na-eme ka mmiri dị ọcha nke abụọ na-eme ka ọ na-eji mgbasa ozi na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ (Na-ejupụta) na n'ikpeazụ ka sump na ala nke ụlọ elu ahụ, ebe a na-atụgharịghachi ya site na mgbapụta ahụ. site na usoro nkesa mmiri ma laghachi azụ n'elu igwe.
•Udo Oyi •Industrylọ Ọrụ Chemical
•Mmiri ara ehi •Ọgwụ
•Usoro nri •Osisi Ice
Nke gara aga: Emechiela Loop Cooling Tower - Cross Flow
Osote: Mepee Steeldị Igwe Na-eme Ka Mmiri Ghaa - Cross Flow
Evaporative Condenser Refriji
Evaporative Condenser-arụ ọrụ